Goobteynu naala Gardara badan, Guddoon jicilsan cadow ku soo Gabado Qarankani ma Gayo. |
Goobteynu naala Gardara badan, Guddoon jicilsan cadow ku soo Gabado Qarankani ma Gayo.
Laga bilaabo 18-May 1991, la soo noqoshadii Madaxbanaanidii Somaliland ilaa iyo sanadkii 2001, madaxda Dalka waxa soo xuli jiray ergooyin qabiiladu soo dirteen oo shir- Wayne ay ku kulmaan ku dooran jiray Madaxweyne, ku Xugeenkiisa iyo labada Gole ee Sharci Dejinta. Sannadkii 2001, ansixintiin Distoorka kadib wuxuu shacabka Somaliland afti ku go’aansadey nidaam dawladeed oo ku saleysan dimoqraadiyad, tiiyo hogaanka Dalkana loo igmadey in ay hayaan xisbiyo siyaasadeed oo ku soo baxa codka shacabka. Bishii December 2002, ayaa markii u horaysay tan iyo 1969, shacabka Somaliland fursad u heley inu u dareero codbixin uu ku kala xulanayo lix urur siyasaadeed, oo sida qorshuhu ahaa sadexda ugu codka badani noqon doonaan xisbiyo Qaran oo hogaanka dalka u tartama. Dimuqraadiyadii maalintaas hanaqaadey maanta waa qaangaadh marka dib loo jaleecsado quruxdii ka muuqatey doodi dhexmartey murashaxiinta u tartamaya kursiga looga taliyo dalka.
Doorashadan fooda inugu soo heysa waa mid doorashooyinkii hore oo dhan ka duwan, kana misaan culus marka la fiiriyo xaaladaha siyaasadeed ee Mandaqada Geeska Afrika iyo waddamada Khaliijka ka taagan whakhigan xaadirka ah. Daruuraha colaadeed ee dul hoganaya waddamada Jabuuti iyo Eriteeriya, dagaalka sokeeye ee ka holcaya Yeman, khilaafka siyaasadeed waddamada Khaliijka ee sii murgaya iyo hagardaamooyinka laga soo maleegayo Xarunta Soomaaliya looga taliyo marka loo fiirsado waxay maskaxdii caafimaad qabtaa odhaneysaa ALLOW Hogaamiye Somaliland ka badbaadiya arrimaha kor ku xusan noo door. Dhibaatooyinkaas inagu gedaamey waxa waliba inoo sii dheer kuwa dalka gudihiisa oo ay ugu daran yihiin abaaraha soo noq-noqanaya, sicir Baraka xadhkaha goostey iyo qaadka umadeeni aafeeyey.
Sedexda Murashax, Faysal Cali Waraabe, Cabdiraxmaan Ciro iyo Musse Biixi, ee u hanqal taagaya hanashada Hogaanka Dalka ugu sareeya, midkee Himilida bushada Somaliland rumeyn kara, hadafka aynu leenahey ina gaadhsiin kara, cadawga Somaliland si geesinimo ku dheehan tahey inooga difaaci kara, faqriga iyo cadaalad darada, Afrika qeyrkeed ka reebey inaga badbaadin kara ? Waa su’aal jawaabteedu u taalo Shacabka Somaliland ee Gudaha dalka ku nool, diyaarna u ah in ay codkooda u hibeeyaan Murashaxa maankoodu rabo.
Murashax Cabdiraxmaan Ciro, oo ka mid ah 3-da nin ee u tartamaaya kursiga Somaliland looga arrimiyo, ma yahey murashax lagu aamini karo Masiirka Ummada oo aragtidiisa iyo maskaxdiisa u madax banaan?
Marka dib loo fiiriyo qaabkii Xisbiga Waddani ku doortey Murashaxiintiisa, nidaamka dimuqraaddiyadana aad uga foogaa, marka la eego khudbadihii Ciro ka jeediyey fagaaraha caalamiga ah ee Chatem House iyo Xarunta Baarlamaanka Midowga Yurub,marka la qiimeeyo doodii u lagaley labada murashax ee kale, waxa isa soo taraya tuhunka odhanaaya in Gudoomiye Ciro aanu haba yaraatee wax go’aan ah ku laheyn talada Xisbigiisa u doortey murashaxa, wuxuu u muuqdaa nin maskaxdiisa musdambeed kale maamulaan. Tiiyo markii horeba aad looga deyrinaayey hoggaamintiisa Golaha Wakiilada muddo ka badan 10 sanno, waxa maantana cadaatey in aanu aheyn hoggaamiye leh go’aan qaadasho ka madaxbanaan talloyinka guracan ee ay siiyaan siyaasiyiinta hore ugu fashilmey hogaaminta dalka iyo kuwa ku soo hungoobey aragtidii madhaleyska noqotey ee Soomaali-Weyn, kana soo cararey Xamar. Kooxahan Maskaxda Gudoomiye Ciro maamula waxa ka mid ah kuwii khiyamada Qaran kula kacey Xukuumada dalka ka talisa ee sida xalaasha lagu doortey iyo kuwii ugu awooda badnaa Xukuumadii Daahir Rayaale ee markii dambena guul darradii Xisbigii UDUB horseedka ka noqdey. Xisbigii Waddani wuxuu noqdey Xisbi ay ku soo urureen siyaasiyiin ku fashiley hoggaaminta dalka.
Haddaba maadama jiritaanka Xisbi sal u yahey wadaagista aragti ay wada leeyihiin xubanaha ka wada tirsan xisbiga, sidii Murashaxa Muuse Biixi ku sheegey doodii loo qabtey mrashaxiinta, waxa mugdi ku jiraa sii jiritaanka Xisbiga Waddani, waayo raggan Xisbiga hoggaanka u hayaa ayaan haba yaraate laheyn aragti mideysan iyo feker wadaag. Raga maanta ka dhex doobinaaya Waddani waa rag dhamaantood u ooman kursi iyo xukun, waxa keli ah isku keeney caashaqa ay u qabaan inay Hogaanka dalka hantiyaan ama ay si haystaan.
Guntii iyo gabagabadii, Goobtaynu naala wey gardara badan tahey, Guddoon galdalolooyinkiisa cadowgu inaga soo gelo Qarankan dhiiga badan loo daadiyey ma gayo, waa in shacabku u hiiliyaa gullaaha Somaliland gaadhey oo doortaa Guddoomiye goor walba heegan u ah difaaca dalka, Gaadh haye Go’aan qaadashadiisuna gabasho laheyn, cadowgeena wadna gariir ku rida.
Waa Bilaahi Towfiiq,
Maxamuud –Yaasin Cabdilaahi Ciro.
Toos(live) Xuska Maalinta Qaran ee Madax Banaanida Jamhuuriyada Somaliland. Halkan…